IOS 10.3.3, watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 kurodha pasi ikozvino kunowanikwa kune wese munhu | IPhone nhau
IOS 10.3.3, watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 kurodha pasi ikozvino kunowanikwa kune wese munhu
Vhiki rakatanga kunyarara zvakanyanya maererano neshanduro dze beta uye svondo rapfuura ma betas akati wandei emaApple OS akasiyana akatangwa vese kune vanogadzira uye nevashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta. Mune ino kesi isu tine yekupedzisira vhezheni kune vese vashandisi veApple, ndiyo iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 10.3.3, watchOS 3.2.3, macOS 10.12.6 uye tvOS 10.2.2.
Haasi isu tese taive pachena kuti vhiki rakasarudzwa neApple kuvhurwa kwayo raive iri, asi hapana mumwe ari nani kupfuura ivo kuti azive kuti kuvhurwa zviri pamutemo kunofanirwa riini. Mune ino kesi uye tisati tatanga kumutsiridza, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nhau mune idzi dzese shanduro dzinotarisana ne kuvandudzwa kwekuita, kugadzikana kwesystem, kugadzirisa kuchengetedzeka uye kugadzirisa bug.
Shanduro nyowani hadziwedzeri shanduko hombe padanho rinoshanda sekunge dzinoita shanduro dzinotevera dzeIOS 11 kana watchOS 4, asi zvakakosha kuti urambe uchivandudzwa kuti unakidzwe nekusimudzika uye kugadziridzwa kwebug kwakagadzirwa, saka negadziriro yeparutivi mano ako ose uye simuka kuti umhanye nema updates.
Shanduro nhanhatu dze beta dzakapfuura kusati kwaburitswa zviri pamutemo iOS 10.3.3 uye zvino tave nazvo zviri pamutemo kurodha pasi, usazeza kuiisa. Kune izvi tinogona kuzviita nyore nyore kubva ku iPhone pachayo kuburikidza neOTA, tichiwana iyo Zvirongwa> Zvakajairika> Software kugadzirisa uye kamwe kudhanilodha gadziriso pasina kumwe kunonoka. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kuisa iyo watchOS 3.2.3 vhezheni, iyo yekumberi kuisirwa kweIOS 10.3.3 inodiwa. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuenda nhanho nhanho uchiisa idzi shanduro nyowani dzakaburitswa maminetsi mashoma apfuura neApple uye izvo zvinonyatso kuvandudza kune inoshanda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » IOS 10.3.3, watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 kurodha pasi ikozvino kunowanikwa kune wese munhu
Kutenda, kurodha pasi.
Icho chakagadziriswa dambudziko iro maemail asinga "pinda"? Izvo zvichiri kuitika kwandiri kunyangwe ndichidzorera (kubva zero)?
Yakagadzirisa iyo bug iyo maemail asingapinde? kunyangwe kutangazve uye kudzorera m inoramba ichitadza ...
Adobe Photoshop Lightroom inogadziridzwa ichiwedzera 3D Kubata rutsigiro kumabhurashi
Inonakidza patent yekufonera emergency kubva ku iPhone